Kiraro orinasa - Digital Manufacturing Co., Ltd.
3D pirinty boosts kiraro orinasa
Ny batch ny kiraro Nike pirinty SL printy 3D tao Shanghai afovoan flagship fivarotana
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, 3D teknolojia fanontam-pirinty tsikelikely tafiditra eo amin'ny sehatry ny shoemaking. Avy kanban kiraro Lasitra ho sanding kiraro lasitra, ny famokarana lasitra, ary na dia kiraro vita faladianao, toa 3D teknolojia fanontam-pirinty hita na aiza na aiza. Na dia kapa pirinty 3D tsy mbola besinimaro amin'ny kiraro fivarotana, noho ny famolavolana sy ny customization mety azo atao ny 3D taratasy kiraro, kiraro maro goavam-be ao an-trano sy any ivelany no matetika nanao ezaka amin'ity teknolojia mipongatra saha tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Haingana fanamarinana famolavolana sy ny fampandrosoana hanafohezany ilay tsingerin'ny
Tany am-piandohan'ny nanaovana dingan'ny kiraro, kiraro bobongolo matetika santionany nampiasa fitaovana nentim-paharazana toy ny lathes, fandavahana potika, punching milina, ary ny koronosy milina. Ny dingana famokarana be mandany fotoana sy nampitombo ny fotoana ilaina hitondrana fampianarana sy ny fanamarinana lasitra kiraro. Mifanohitra amin'izany kosa, dia afaka ho azy 3D fanontam-pirinty, ary niova fo haingana solosaina kiraro santionany ho modely, izay tsy vitan'ny hoe mandresy ny famerana ny dingana nentim-paharazana, ary koa mamerina amin'ny laoniny ny famolavolana foto-kevitra tsara kokoa, ary miara-miasa amin'ny fanaovana fitiliana ny vokatra sy ny Optimization.
Manam-petra ny structure, avo sy ny fahaiza-miasa mahomby manovaova
Miorina amin'ny nomerika ny tombony haingana ny famokarana, ny teknolojia fanontam-pirinty 3D dia tsy voafetra amin'ny alalan'ny rafitra, mamela ny endrika ho sanatria ny aingam-panahy. Ankoatra izany, 3D fanontam-pirinty manovaova endrika manamora ny manova teti-dratsy sy ny hampihenana ny vola lany upfront noho ny bobongolo rework.
3D pirinty alows ny posibility ny personalilzed customization
dia antenaina fa 3D pirinty kiraro azo manokana ho an'ny olon-tsotra costomization. Matetika, noho ny vidim-rafitra, akora, ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny vidin'ny kiraro be namboarina ambony kokoa noho ny an'ny olon-tsotra kiraro. 3D pirinty dia afaka mampihena ny vola lany ny lasitra, hanafohezany ilay tsingerin'ny ny fampandrosoana sy hanome fanazavana utilisation. Ao amin'ny hoavy, dia antenaina mba hihaona amin'ny ilain'ny mpanjifa tsirairay ao amin'ny dingana famokarana raha manamaivana ao anatin'ny masonkarena ny orinasa.
Ampio mpanjifa vaovao tongotra banky angona
3D pirinty Mifototra amin'ny 3D angon-drakitra vaovao modeling ny mpanjifa ny dian'ny, ary avy eo mampiasa ny 3D printy, mba hamokarana ny insole, faladiany sy ny kiraro izay tena manaraka ny mpanjifa ny tongotra endrika, mampahafaingana ny Optimization ny vokatra famolaina, dia nitondra azo ampiharina maneho ny sehatra manokana amin'ny kiraro orinasa.
3D mpanonta soso-kevitra
Manokana customization: 3DSL-360 & 3DSL-450
Small Batch famokarana: 3DSL-600 & 3DSL-800